Mandrill: Email Platform maka Ngwa Gị | Martech Zone
Mandrill: Email Platform maka Ngwa Gị
Fraịde, Jenụwarị 25, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Njikọ ọnụ na-abụ ihe dị mkpa na usoro azụmaahịa na azụmaahịa na mmemme email izizi ezughị. Ndi folks dika Right On Interactive ewerela nke ha akụrụngwa ahịa sistemụ ma wuo nke ha email n'elu ikpo okwu ozugbo n'ime ya ka ị ghara ịzụta ma ọ bụ iwekota na ESP.
O siri ike ime n’ezie. Mgbe obi adịghị ya mma n'ihi erughị eru nke ọrụ email, Adam Obere jiri ndị na-enyefe ihe ntinye akwụkwọ ozi (MTAs) mepee iji mepụta usoro ozi email nke ya na nke ya. ire ala na ụlọ ikpo okwu. Ugbu a, ọ na-eziga ọtụtụ nde ozi ịntanetị maka ndị na-ahụ maka ụlọ na nnwere onwe dị elu nke kacha nta na ihe ọ kwụrụ.
Enwere ngwa ngwakọ n'ebe ahụ ugbu a, kwa. Mailchimp bidoro ọrụ n'afọ gara aga akpọrọ Mandrill. Ọ bụ ihu ọma na njedebe nke Mailchimp niile na akuko, deliverability and support… but with only a wide ntinye ntinye ihe omume (API) karịa njedebe ihu.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ị na-ewu ngwa gị na ngwa mgbakwunye gị na Mandrill ka ị ziga ozi azụmahịa ahụ. Ọtụtụ, ọtụtụ ngalaba IT na-emehie nke izipu ozi email n'iji ndị ọrụ sava 'SMTP engines ha. Nsogbu na-ebilite fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo… n'etiti spam na-akọ, bounces, nzaghachi loops, Nyocha na ziri ozi isi, ọ fọrọ nke nta a ọrụ ebube na gị email na-eme ka ọ bụla igbe. Lọ ọrụ ọ bụla na-ezipụ ọtụtụ puku ozi ịntanetị kwesịrị ijikwa usoro nnyefe site na iji teknụzụ a nabatara.
Pnye ọnụahịa dị ezigbo mma… zipu ihe ruru 12,000 email kwa ọnwa n'efu! Ziga ozi-e 40k maka $ 9.95 / mo. Ahịa na-aga kwa puku puku mgbe nke ahụ gachara ma na-asọ asọmpi.
Tags: APIemail apionye na-enye ọrụ emailespmailchimpiwu